Mpivarotra mpivaro-tena any China Lipgloss manokana labo-bolo vita amin'ny marika manokana DIY creamy lipgloss factory sy mpamatsy | Iris Beauty
Matte lip stick personal label make lip stick mpivarotra ...
Sarin'ny molotra manokana ny haben'ny molotra lozisialy tsy miantra ...
Ny lokomena sy ny lokon'ny molotra dia mamolavola volom-borona ...
ambongadiny molotra stick custom logo vegan velvet molotra sti ...
Lamba tsy misy fangarony molotra manokana labozia manjelanjelatra ...
Mpivarotra lipgloss manokana marika manokana momba ny molotra diy c ...
OEM tarehy fototra makiazy ranon-javatra boribory ambongadiny p ...
ambongadiny eyeshadow palette Vegan avo pigment priva ...
Mpivarotra lipgloss manokana marika manokana momba ny molotra diy creamy lipgloss
Ny molotra tsy misy kofehy tsy misy lozabe sy lozabe, mamirapiratra ary mamirapiratra. Manosotra ny molotra miaraka amin'ny Vitamina sy dibera Shea.
Vidiny EXW: US $ 0.99 - 2.99 / Piece
OEM. ODM: Available
Ny volom-bavantsika dia maimaim-poana amin'ny Vegan & Cruelty, manana endrika malefaka, tsy miraikitra amin'ny molotra, Mamando ary mamirapiratra.
Ity gloss molotra ity dia manan-karena otrikaina E voajanahary, izay miaro tsara ny molotra, mamorona sarimihetsika miaro ny molotra mando, manakana ny fahaverezan'ny hamandoana, mampihena ny tsipika tsara sy ny molotra maina ary ny fikosehana. Avereno ny famirapiratan'ny molotra, ataovy malemy sy malama ny molotra ary mahatsiaro ho feno hamandoana.
Mety amin'ny fivorian'ny mpianakavy na namana, fampisehoana lamaody, fampiasana isan'andro sy ny sisa. Ny habe azo entina dia mamela anao hanatsara ny molotrao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Loko 65 samy hafa izay azo atambatra mora foana amin'ny fomba fanaovana makiazy isan-karazany, fotoana ary lokon'ny hoditra.
Anaran-javatra Volomaso molotra
Ny tombotsoantsika 1. Tsy misy fitsapana amin'ny herisetra / tsy fitsapana biby
5.Misy otrikaina / dibera shea
Sample azo ekena
Fonosana 1 pcs ao anaty boaty miloko famolavolana
Fandefasana Amin'ny alàlan'ny rivotra / ranomasina / Express
Payment TT / Paypal / West union sns.
1.Q: mpanamboatra orinasa ve ianao?
A: fanamboarana makiazy matihanina izahay.
2.Q: Ahoana no ahazoako santionany hijerena ny kalitao?
A: voalohany, ampahafantaro anay ny zavatra takinao momba ny entana, avy eo hanome sosokevitra mifanaraka amin'izany izahay ary hanome teny nindramina, feno 65 ny lokon'ny volon'ny molotra. Raha vao manamafy ny antsipiriany rehetra dia afaka mandefa ireo santionany. Ny sandan'ny santionany dia haverina raha apetraka ny kaomandy.
3.Q: Manaiky OEM ve ianao ODM ary Azonao atao ve ny manao ny endrika ho anay?
A: Eny, manao OEM ODM izahay ary manome serivisy famolavolana.
4.Q: Mandra-pahoviana no mety antenaiko hahazoana ilay santionany?
A: Aorian'ny andoavanao ny sarany santionany ary andefasanao aminay ireo rakitra voamarina, dia ho vonona halefa amin'ny 3-7 andro fiasana ireo santionany. Ny santionany dia halefa aminao amin'ny alàlan'ny express ary tonga ao anatin'ny 3-7 andro. Azonao atao ny mampiasa ny kaonty anao manokana na mandefa mialoha anay raha tsy manana kaonty ianao.
5.Q: Ahoana ny amin'ny fotoana firy amin'ny famokarana betsaka?
A: Amim-pahatsorana, miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana sy ny vanim-potoana nametrahanao ny filaminana. Raha ny mahazatra dia 25 - 35 andro izany. Izahay dia orinasa ary manana fikorianan'ny vokatra matanjaka izahay, soso-kevitra hanombohana ny fangatahana roa volana alohan'ny daty tadiavinao hahazoana ny vokatra ao amin'ny firenenao.
6.Q: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A: Manaiky ny T / T, Paypal, West Union izahay.
7.Q: Ahoana ny fomba hifandraisana anay?
Tianay ny manampy amin'ny fanontanianao na amin'ny hevinao!
Izahay eto dia hanampy anao - azafady aza misalasala mandefa mailaka aminay amin'ny irisbecosmetics@gmail.com.
Previous: Volom-bava manjelanjelatra mamirapiratra lipgloss ambongadiny tsy misy marika loko lipgloss manokana
Manaraka: Lamba tsy misy fangarony molotra manokana marika tsy mihanjahanja gloss lipliposs vegan sy habibiana maimaimpoana molotra miboridana molotra
mamirapiratra lipgloss mamirapiratra
mpanamboatra menaka molotra
fanao mpivarotra molotra
fanao mpivarotra lipgloss
ambongadiny lipgloss tsy misy marika tsy miankina
plumper molotra manokana
gloss molotra manjelatra
marika manokana momba ny molotra manjelanjelatra
ambongadiny lipgloss fanao logo pigment molotra glos ...
mpivarotra gloss mpivarotra molotra manokana plumper glos ...
Volom-bava manjelanjelatra mamirapiratra lipgloss tsy misy lab ...
Mazava molotra gloss marika manokana ambongadiny ambongadiny mazava ...
labozia manokana molotra gloss manokana glitter molotra glos ...
Raha te hahalala antsipiriany misimisy kokoa ianao, andefaso fanontaniana izahay izao.
Fampahalalana momba ny magazay